Wararkii ugu dambeeyay Ra’iisul Wasaare Khayre Oo ku jira Wada-tashiyadii ugu dambeeyay ee Beelaha Soomaaliyeed si uu soo magacaabo Golihiisa wasiirada.
March 8, 2017 - Written by berka83 - Edited byberka83 Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Villa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Khayre ayaa sheegaya inuu 24-kii saac ee ugu dambeeyay ku jiray wada-tashiyadii ugu dambeeyay ee Beelaha Soomaaliyeed, si uu u soo magacaabo Golihiisa wasiirada oo aad loo sugayo.
Inkastoo maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayey in lagu dhawaaqi doono Liiska Golaha Wasiirada cusub ee Xukuumadda Ra’iisul wasaare Khayre, ayaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in Ra’iisul wasaaruhu uu beelaha Soomaaliyeed qaarkood ka dhaadhicinayo inay ku qancaan qaabka uu wax u qaybiyo.
Shakhsiyaad fara badan ayaa saacadihii ugu dambeeyay Ra’iisul wasaaraha u Gudbiyey Taariikh nololeedkooda Tacliineed iyo waxqabad si ay ugu biiraan wasiirada Cusub.
Ra’iisul wasaaraha ayaa Soo magacaabista Golahiisa Cusub, wuxuu kala tashanayaa sidoo kale Madaxwayne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Aqalka Hoose Proff. Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa laga sugayaa Gole wasiiro oo kooban islamarkaasina uu waxqabadkooda ku soo xusho xusho.